DAAWO: Khudbadii Xaliimo yare iyo Wakhtiga Doorashada Dalka oo dib loo dhigayo ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
DAAWO: Khudbadii Xaliimo yare iyo Wakhtiga Doorashada Dalka oo dib loo dhigayo !
Jun 27, 2020 - 8 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) oo maanta warbixintii laga sugayey guddiga ka hor jeedisay fadhiga golaha shacabka ayaa dalbatay mudo kordhin, maadaama sida ay sheegtay mudada u hartay aysan doorasho dalka uga qaban karin.
Guddoomiye Xaliima Yarey ayaa khudbadii ay maanta ka hor jeedisay golaha ku soo bandhigtay laba hab oo ay u dhici karto doorashada dalka, kuwaas oo labaduba u bahan mudada loo kordhiyo guddiga doorashooyinka.
Labada nuuc doorasho ee Xaliima Yarey ay soo bandhigtay mid waxa uu ku xusanyahay sharciga doorashooyinka ee baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay, waxay sheegtay in kaasi u baahanyahay uu waqti iyo kharash badan, waqtiga oo ay xustayna waxay ku sheegtay inay u baahanyihiin 13 bilood oo ka bilaabaneysa bisha soo socota ee July 2020 kuna eg August 2021-ka.
Sowtay dadka u sheegi jirtay inay nidaam doorasho oo xitaa Somaliland ka dhacaya hayso!kkk Mee khuraadaadkii.kkk Waxay la soo foolanaysay waa Xaarmaajo wakhti ha loo kordhiyo hadana intaa uun bay sheegtay!
kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkk
CONTRACTIGA HAYSKU YARAYN, SHAN SANO KA DHIGO, CAALAMKA CORONAVIRUS IYO SHAQO LA’AAN BAA KA JIRTEE. AWALBA QURBA JOOG BAAD AHAYDE..
Naagtaan Xaliima Yareey, oo ka dhalatay dadka caqliga daanyeer leh ee Ceeyr waa wasaqad daanyeer ah. For quite sometime, ayeey dhiladaan Domalida iyo aduunka been cad u sheegi jirtay oo ah in eey Somaliya ka sameeynayaan iyada iyo ciyaala suuq Farmaajo iyo daanyeer Kheeyre doorasho qof iyo cod ah. Naagtaan daanyeerta ah eaxeey dhagaha la maqashay doorasho qof iyo cod ah. Waa doqon aanan caqli laheeyn eey ku garato waxa eey ka hadleeyso uu caqliga diiday.
Hadeer xataa muddada eey sheegtay ee kala ah 13 bilood iyo 9 bilood labadda doorasho Rey sheegtay xataa laguma qaban karro. Waa stupid nimo kale oo ah in doorashooyinka eey sheegeeyso eeysan suurtagal aheeyn in lagu qabto waqtiyadda cusub oo eey sheegtay.
Sidaas darteed waa in loo sheegaa dhiladaan Xaliima Yareey iyo daanyeero Farmaaho iyo Kheeyre in iska daa 1 sanno’e, eeysan walaahi suurtagal aheeyn in Somaliya eey ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah xataa 40ka sanno ee soo socota. Dadka daanyeeradda ah waxaa lagu gartaa makala yaqaanaan waxa suurtagalka ah iyo waxa aanan aheeyn.
Sidaas owgeed cawaanta mucaaradka isku sheegta iyo maamulada qabiilada waa winery u sheegaan Farmaajo in uu qabto doorasho lamid ah midii lagu doortay oo ah 4.5 qabiilada xildhibaanada kaga soo baxa in eey doortaan madaxweeynaha. Doorashaas 4.5 ka waaye waxa kaliya oo ka suurtagalli karra Somaliya 40 ka sanno ee soo socota.
Kaliya dowladnimadda hala sii xoojiya, qabiilada ha’isla xisaabtamaan. Intaas uun baa laga rabaa daanyeerta Farmaajo iyo kuwa rabba in eey dadka Somaliyees ka faa’iideeystaan.
Hadii uu Farmaajo qaban waaya doorasho lamid ah tii uu kusoo baxay oo ku dhacdo waqtiga uu madaxweeynenimadiisa ku egtahay, Dee waa dhaqankki adeerkiis Afweeyne, ee xukunka waa in walaahi xabad looga dajiyaa.
Abuu abdirahman says:
Qofkaan magaca cadaado watow ma ogtahay hadii qofku caayo qof kale waaldkii in caydaasi ku dhaceyso kan wax caayaya waalidkii hadaba haweeneydaan aad ku sheegaysid kilimaadka xun waxaad caayee ayada maaha ee waa hooyadii ku dhashay ku nuujisay kuna soo korisay ee saa ogow kana daa af xumada iyo cayda hooyadaa
Abuu abdirahman, Mahadsanid iyo barasho wanaagsan kulanso Adeer.≈©≈Adeer dadka Boggaan wax ku qora OGOOW inaysan wada fayoobayn. WBT
Sheekadii carabta khaniisiinta kugu soo shubeen maad iila imaatay? Hooyadeey ma’ahan waxa aan caayayo ee waa dhiladaan Xaliimo yareeyda la dhaho waxa in la caayo istaahila. Adigana daanyeer ayaad tahay.
Qof walbo waa ogaa waxa kasoo socdo. Gabadhaan. In aysan meesha waxba ku hayn waxaana aysan socon Karin. Qof walbo waa ogyahay.
Anigu waxaan qabaa in ay is casisho waayoo waxaan waxaa ka imaan karo qalalaase.
Ninkii Wuxuu dhahey xaggeebuu ku yeerin ninkii Buunkayga Xaday.
Markii lagaaro 8th February 2021,
wax laga dhageysan majiro Farmaajo
Wax uu saxiixikaro ma jirto
He will be an illegitimate Leader.
Taariikhdaan la rabno oo ah ninkii ugu horeeyey oo reer Qurac ah oo kursiga ku fuulo doorasho ugana dego doorasho – hadduu diido wuxuu noqon doonaa NINKII SEDEXAAD EE XOOG EXILE looga saaro Xamar.
*Tartan ama Tanaasul ama Tahriib
RW. Khayre “Madax Madow ayuu Maan ku hadhay”
Muqdisho ( Kalshaale ) Raysal waasaarihii Hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ...
Madaxwayne DENI oo ka hadlay Guusha Ilhaan Cumar iyo Soomaalida kale ee Maraykanka
Garoowe ( Kalshaale ) Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa ugu hambalyeeyay Soomaalida ...
Ilhaan Cumar oo Doorashadii Guul ka gaadhay iyo Hadal Cajiib ah oo ay ka tidhi Weerarkii ku socday !
Minneapolis ( Kalshaale ) Ilhaan Cumar oo ah Gabadh Soomaaliyeed, Islamarkaana ka tirsan Aqalka ...
Maxay ka Wada hadleen Madaxwayne Qoorqoor iyo Cabdikariin Guuleed?
Istanbul ( Kalshaale ) Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabidkariin Xuseen Guuleed ayaa dalka Turkiga ...
Wararkii u dambeeyay Dhuusamareeb, Diyaar Garowga Shirka iyo Tirakoob Ciidanka lagu bilaabay
Dhuusamareeb ( Kalshaale ) Wararkaka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in diyaar garowgii ugu ...